ချစ်သူများနေ့မှာအိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားက မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဇွတ်အတင်းကာမရယူပြီး ရက်ရက်စက်စက်သတ် – Myanmar Magazine
လူမဆန်တဲ့​ပိုင်းလုံး​ကောင်​တ​ယောက်​နဲ့social mediaကို အသုံးမချတတ်​တဲ့​​​ကောင်​မ​လေးတ​ယောက်​​ကြောင့်​..နစ်​နာမှု​တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်​.​
​ကောင်​မ​လေးရဲ့ဘဝကြီး​တော့ပထမဦ ဆုံးအ​နေနဲ့စုပ်​ပြတ်​သတ်​ခဲ့ရပီ​.နှစ်​ဖက်​မိဘ အသိုင်းဝိုင်း​တွေမျက်​နှာပျက်​ရ.ရွာနာမည်​ပျက်​ရ..နစ်နာမှု​တွေအများကြီးအများကြီး ဖြစ်​ခဲ့ရတယ်​..
ဖြစ်​စဉ်​က​​တော့ ​ကောင်​​လေးတ​​ယောက်​ကFebruary 14ပီး​နောက်​တရက်​မှာ..Face book က​နေစသိတာ၁၀ရက်​ခန့်​သာရှိ​သေးတဲ့​ကောင်​​မ​လေးတ​ယောက်​နဲ့​သမီးရည်းစားဖြစ်​ပီး ချိန်း​တွေ့ကြတယ်​​ ။ ချိန်း​တွေ့စဉ်​မှာပဲ..​ကောင်​​လေးကအတင်းအဓမ္မကာမရယူတာလားခြိမ်း​ခြောက်​၍ပဲလားမ​ပြောတတ်​ ဟိုဒင်းဟိုဟာဖြစ်​ကြတယ်​.
​ကောင်​မ​လေးက..အဲ့လိုဖြစ်​ပီး​တော့မှ​တော့.လိုက်​ပြန်​မယ်​​ပေါ့..​ခေါ်ပြန်​ပါ​ပေါ့ ​ပြောတယ်​.အဲ့အချိန်​မှာ..​ခေါ်မပြန်​ဘူးဆိုပီး.(​ကောင်​မ​လေး​ပြောစကားအရ) ​ကောင်​​လေးကလူမဆန်​စွာ လည်​ပင်းညစ်​တယ်​(​ကောင်​မ​လေး​က​တော့.လည်​ပင်းညစ်​တာသိ​သေးတယ်ဟု​ပြောပါတယ်​.)
လည်​ပင်းညစ်​ပီးတဲ့ အချိန်​မှာ.​ခဲနဲ့ထပ်​ထုတယ်​.(ဒါမ​သေမခြင်းရက်​ရက်​စက်​စက်​သတ်​တာလို့ပဲမြင်​ပါတယ်​) ပြီး​တော့.​​ကောင်​​လေးက..​ကောင်​မ​လေးကိုချိန်း​တွေ့တဲ့​နေရာမှာ..ဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်​..အချိန်​အနဲငယ်​ကြာမှာ..​ကောင်​မ​လေးကသတိပြန်​ရလာတယ်​..အဲ့​ချိန်​မှာ.ရွာသား​တွေ ​တွေ့ပီး ​ဆေးရုံပို့ကြတယ်​..
(​ကောင်​မ​လေးက အခု ​ဆေးရုံမှာပါ)သတိ​ကောင်း​ကောင်းပြန်​လည်​လာ​တော့မှ.​ကောင်​မ​လေးကို​ ​​သေချာစစ်​​မေးပြီး​တော့ရဲစခန်းအ​ကြောင်းကြားးပြီး ​ကောင်​​လေးကိုသွားဖမ်းကြတယ်​.(​ကောင်​​လေးက အခု ရဲစခန်းမှာပါ)
​ကောင်​မ​လေးက​ကောင်​​လေးမှာဇနီးမယားရှိတာကို(မသိ၍ပဲလား သိရက်​နဲ့လား​တော့မ​ပြောတတ်​)အပြင်​မှာမှာမ​တွေ့ဖူးပဲ line ​ပေါ်မှာစသိတဲ့ ​​ကောင်​​လေးနဲ့ ​တွေ့ကြတယ်​..ဒါဘာလို့လဲ..​ကောင်​မ​လေးကစဉ်းစား​တွေး​ခေါ်တတ်​တဲ့သိဉာဏ်​မမရှိတာလား.မရှိ​တော့​အောင်​chat box မှာ မဖွယ်​မရာပုံ​တွေပို့တာခံရပီး.မွန်​ထူ​နေခဲ့တာလား.တခုခု​တော့တခုခု​နေမှာ​ပေါ့..
(​ကောင်​မ​လေးမျက်နှာ​ကို​တော့..သိက္ခာကိုငှဲ့ကွက်​၍stiker အုပ်​ထားပါသည်​)​ကောင်​မ​လေးက အသိဉာဏ်​မရှိ၍​ဗဟုသုတမရှိ၍..ထားလိုက်​ပါ..​ကောင်​​လေးဟာ..ဇနီးမယားရှိသူဖြစ်​တယ်​..Face book သုံးတယ်​ သူတပါးသားသမီးကိုအ​ပျော်​စ​နောက်​တာ​တွေတင်​မကပဲ..ရည်​စားစကား​ပြောတယ်​ .(​ကောင်​​လေးက​တော်​ကီ​ကောင်းလို့ပဲ ​ကောင်​မ​လေးပြန်​ကြိုက်​တာလားမသိ)
ကိုယ့်​မှာ..ဇနီးမယားရှိရက်​နဲ့ကိုယ်​ချင်းစာစိတ်​မရှိပဲဒီလို သူတပါးသားသမီးကို လူမဆန်​စွာပြု မူတာကိုကျ​နေ်ာ့အ​နေနဲ့ အပြင်းအထန်​ ရှုပ်​ချပါတယ်​..ဒီစာကိုလည်း..မိန်းက​လေးအများစုဆင်​ခြင်​နိုင်​​အောင်​ ​ရေးခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​..​ကောင်​​လေးဟာ.ပင်းတယမြို့နယ်​ဒရယ်​အင်း(ဇလယ်​အင်း)​ကျေးရွာကဆိုတာမ​ဖော်​ပြချင်​ပါ
ဒါ​ပေမဲ့ ဒီလိုလူမဆန်​တဲ့​ကောင်​ရဲ့သိက္ခာကနဂိုကမရှိလို့ ငှဲ့လည်းမငှဲ့ညာနိုင်​ပါ။ပုံပါ ​ကောင်​​လေးကို ထိုက်​သင့်​တဲ့ အပြစ်​ဒါဏ်​​ကျခံ​စေချင်​ပါတယ်​..မိန်းက​လေးအများစုကို သတိ​ပေးချင်​ပါတယ်​..မျက်​စိ​ရှေ့အမြဲ​တွေ့​နေတဲ့ လူ​တောင်​မယုံရတာကိုလိုင်း​ပေါ်ကသိပြီး..ဘာရှိတယ်​..ဘလိုချမ်းသာတယ်​..ယူပြီးရင်​ဘယ်​လိုထားမယ်​ဆိုတာ​တွေကို..ဘာ​ကြောင့်​ယုံကြတာလဲ..
← ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချော်လဲ ရင်း နာကျင် ဖီးတတ် ခံစားနေရတယ် ဆိုတဲ့ နန်းသီရိမောင်
တစ်ချိန်ကပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပဲပြောလိုက်တဲ့ နန္ဒာလှိုင် →
April 12, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးကို ဖမ်းဆီး၊ အင်းစိန်ထောင်ပို့